Vakana vakana vy tsy misy fangarony
Ny vy vy dia ny fanafohezana ny vy tsy mahazaka asidra. Izy io dia mahatohitra ny haino aman-jery malemy malaky toa ny rivotra, etona, rano na vy tsy misy fangarony, ary antsoina hoe vy tsy misy fangarony. Ny harafesina manohitra ny haino aman-jery simika (asidra, alkaly, sira, sns. Harafesin'ny simika) Ny naoty vy ...
Vakana vy 316
1. Endri-javatra: Noho ny fanampiana Mo, ny fanoherana ny harafesiny, ny fanoherana ny harafesin'ny atmosfera ary ny tanjaky ny hafanana ambony dia tsara indrindra, ary azo ampiasaina amin'ny toe-javatra henjana izy io; fanamafisana asa tena tsara (tsy andriamby); hafanan'ny hafanana ambony ***; vahaolana matanjaka fanjakana Non-andriamby ...
Fomba fanao poloney matetika ampiasaina amin'ny vy tsy misy fangarony
Ny fomba fanaingoana mahazatra an'ny vy tsy misy fangarony dia ny famolahana mekanika, ny famolahana simika ary ny famolahana elektrika. Ireo fomba telo ireo dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka entiny. 1. Famolahana mekanika. Ny tombony dia ireo faritra voahodina manana leveling tsara sy hig ...
Fampitahana vakana vy tsy misy fangarony
304 dia fitaovana mahazatra amin'ny vy tsy misy fangarony, 7.93g / cm3, fantatra koa amin'ny anarana hoe stainless vy 18/8 ao amin'ny orinasa. Ny hafanana avo mahazaka 800 degre, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fanodinana tsara sy ny hamafiny avo, dia be mpampiasa amin'ny indostria sy ny haingon-trano fanaka ary ...
Fa maninona no harafesina ny vy tsy misy vy
Karazana vy izay manana fahaizana manohitra ny fitrandrahana atmosfera ary manana ny fahaizany manohitra ny harafesina ao anaty haino aman-jery misy asidra, alkaly ary sira! Ho harafesina ve ny vy tsy misy vy? Raha vao jerena dia toa propositio diso ...
2020-07-25 15:36:07 Fampisehoana vakana vy tsy misy fangarony: mahatratra 56-58 degre, hamafin'ny herinaratra, fanoherana ny fahamendrehana, fanoherana ary hamafisan-kery: fampiharana vy mahery vy: karazana vy vy vy marokoroko, ny karazany lehibe dia matevina vy ...
Baolina vy tsy voatanisa
Ny baolina vy tsy misy fangarony dia mazàna vokarin'ny fizotran'ny fanaovana vy vy. Amin'izao fotoana izao, ny baolina vy tsy misy fampiasa matetika dia 201, 302, 304, 316, 316L, 420, 440C. Baolina vy tsy misy fangarony 440 / 440C: fampisehoana: mahatratra 56-58 degre, henjana, mandeha ...
Ahoana ny fomba fanaovana baolina goavam-be tsy misy fangarony, ny fomba famokarana betsaka ary ireo fitaovana famokarana ireo
Ny vy vy dia fitaovana vy. Ny vy tsy misy fangarony dia manondro vy izay mahazaka haino aman-jery malemy malemy toy ny rivotra, etona ary rano ary ny haino aman-jery manimba simika toy ny asidra, alkaly ary sira. Antsoina koa hoe vy tsy mahazaka asidra. Amin'ny fampiharana ...
Ss304 Steel Ball, Ball varahina 3mm, 3mm Ball varahina, Ball varahina matanjaka, Ball varahina, Ball varahina matevina,